ကန်ထရိုက်တာအချို. တွက်ခြေကိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ပြောင်းရွှေ.လုပ်ကိုင်လာ| ShweProperty
Article ကန်ထရိုက်တာအချို. တွက်ခြေကိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ပြောင်းရွှေ.လုပ်ကိုင်လာ
ကန်ထရိုက်တာအချို. တွက်ခြေကိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ပြောင်းရွှေ.လုပ်ကိုင်လာ
The Modern | 24 July 2015
ကန်ထရိုက်တိုက်ဈေးကွက် တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာတာကြောင့် ကန်ထရိုက်တာအများစု လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို. တွက်ခြေကိုက်တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ရွှေ.ပြောင်းလုပ်ကိုင်လာကြတယ်လို. သိရပါတယ်။
‘အခုက တိုက်ခန်းနဲ. အိမ်လုပ်ငန်းတွေပဲ မဟုတ်ဘူး လမ်းခင်းတာတွေပါ လုပ်လာကြတယ်။ တချို.ပရော့ဂျက်တွေဆိုရင် ကန်ထရိုက်တစ်ဦးတည်း မဟုတ်ဘဲ အုံနာလေးယောက်လောက်ခွဲပြီး လုပ်ငန်းမြန်မြန်ပြီးအောင် ကဏ္ဍခွဲပြီး လုပ်တာတွေများလာတယ်’ လို. UKL Group ဆောက်လုပ်ရေးရဲ. မန်နေဂျာကိုထက်ဝေဖြိုးကပြောပါတယ်။
အစိုးရ လုပ်ငန်းတင်ဒါကြေးငွေက စပေါ်ငွေ များပြားတာကြောင့် ငွေကြေးအင်အားတောင့်တင်းတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက လုပ်ငန်းတွေကို ကုန်ကြမ်းချထားပေးပြီး အကျိုးတူလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆောက်လုပ်ရေးနဲ. ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းလိုလိုမှာ လက်ဆင့်ကမ်းငှားရမ်းမှုတွေ ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်က အကျိုးတူကန်ထရိုက်တာတွေမှာ အခကြေးငွေယူပြီး ကန်ထရိုက်အငယ်တွေကို တစ်ဆင့်ခံအမည်ခံနဲ. လုပ်ကိုင်စေကြပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကုန်ကြမ်းအားလုံးကို ချသာပေးပြီး လူအင်အားနဲ. နည်းပညာသာ ငှားရမ်းပြီး အကျိုးတူလုပ်ဆောင်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
‘နောက်ပိုင်းက တင်ဒါတွေဆို ကိုယ်ဘက်က အလုပ်သမားနဲ. မြန်မြန်ပြီးနိုင်ဖို.ပဲ လိုအပ်တယ်။ သူတို.ဘက်က လုပ်ရမယ့် ကုန်ကြမ်းရော နေရာပါ ရှာပေးတော့ အမြတ်ပိုကျန်တယ်’ လို. ဆောက်လုပ်ရေး ကန်ထရိုက်တာတစ်ဦးက သူ.အဖြစ်ကို ပြောပါတယ်။
လမ်းပိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာ ကုန်ကြမ်းပေးတည်ဆောက်မှုအတွက် တစ်ပေကို ကျပ် ၃၀၀၀လောက်အထိ ရရှိပြီး တင်ဒါတစ်ခုရဲ. လမ်းပိုင်းတစ်ခုက နှစ်မိုင်လောက်အထိ အရှည်ရှိတယ်လို. သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစိုးရက ရောင်းချမယ့် အငှားချ အိမ်ရာတွေမှာလည်း အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဖို. တင်ဒါတွေကို အခုလို လုပ်ငန်းခွဲဝေပြီး အကျိုးတူ လုပ်ကိုင်လာတာတွေ ရှိတယ်လို. သိရပါတယ်။
ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းအများစု ငြိမ်သက်နေပြီး ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ. အိမ်အလှဆင်လုပ်ငန်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်း၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းစတဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ. တွဲဖက်လုပ်ကိုင်လာကြတယ်လို. သိရပါတယ်။